Chii chinonzi Social Media Monitoring? Zvese Zvaunofanirwa Kuziva! | Martech Zone
Chii chinonzi Social Media Monitoring? Zvese Zvaunofanirwa Kuziva!
Chitatu, November 16, 2016 Douglas Karr
Zvichida tinofanira kutanga sei. Dzimwe nguva tinokurukura zvemagariro enhau nevatengi, uye ivo vanoti havasi pasocial media saka havana hanya nazvo. Zvakanaka… zvinosuruvarisa nekuti kunyangwe hazvo mhando yako isiri kutora chikamu munhaurirano dzevanhu, hazvireve kuti vatengi vako nevanotarisira vatengi havasi kutora chikamu.
Nei Uchifanira Kuongorora Zvemagariro Midhiya
An kutsamwisa mutengi inokurukura kushungurudzika kwavo online. Sangano redu rakave nekutaurirana kwakaoma mwedzi mishoma yapfuura uye isu takahaya zviwanikwa zvekugadzirisa mamiriro acho nemutengo wedu. Isu takatosimbisa nemutengi kuti vakagutsikana nemhedzisiro… asi takazovawana vachikurukura nesu pamhepo. Takabva tangofona, tichigadzirisa mamiriro ezvinhu, uye vakabvisa hurukuro. Dai isu tanga tisiri kuteerera, isu tingadai tisina kuzombokwanisa kuve nechokwadi chekuti vagutsikana uye mukurumbira wedu wakachengetwa zvine hungwaru.
A anotarisira mutengi izvo zvakakwana kune zvigadzirwa zvekambani yako uye masevhisi ari mune mamwe maforamu enharaunda achikumbira rubatsiro uye kurudziro kumutengesi. Sezvo iwe hausi muhurukuro, mumwe mukwikwidzi anopindira, anovabatsira, uye anomuka kuti awane kontrakiti.
A happy customer inotaura iwe online. Ongororo uye zvipupuriro zvakaoma kuuya nazvo, saka kana mumwe munhu akataura pamusoro pako - kwete chete kuti iwe unofanirwa kuzvinzwa iwe unofanirwawo kuidzokorora. Yechitatu-bato zvipupuriro inzira dzinoshanda kwazvo dzekuunganidza avo vanotarisira kuvimba nevatengi.
ichi infographic kubva kuSalesforce uye Kusunungura inofamba neshoko uye hwaro hwehukama hwekutarisa. Kubva pamatemu - semusiyano uripo pakati pekuteerera, kuongorora, manejimendi, analytics, uye ungwaru - kumatekiniki chaiwo echiratidzo chako kuti ubatanidze pasocial media zvinobudirira.
Chii chinonzi Social Media Monitoring
Tags: salesforcemagariro enhau analyticssocial media njerepasocial media kuteereramagariro enhau manejimendimagariro enhauunbouncechiichii chinonzi social media marketing
33Across: In-Tarisa Vateereri Kuita Mari neiyo Pre-Bhidha Yekubiridzira Sefa
Matipi makumi maviri ekutyaira E-Commerce Shanduko ino Mwaka weZororo